WordPress Website တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကို ဘယ်လိုမျိုး RSS Feed ယူပြီး ဘယ်လိုလက်ခံမလည်း ? | Burmese Web
WordPress Website တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကို ဘယ်လိုမျိုး RSS Feed ယူပြီး ဘယ်လိုလက်ခံမလည်း ?
by Burmese Web | Aug 28, 2020 | Blog, Plugins, Tutorial |0comments
သင့်မှာ WordPress Website ၂ခုရှိပြီး တစ်ဘက်က တစ်ခုကို တစ်ဘက်မှာပေါ်စေချင်တယ် ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလည်း ?
သေချာတာကတော့ ကျနော်တို့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဝဘ်ဆိုဒ်ဘက်က RSS Feed ကိုတော့ထုတ်ရမှာအမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် RSS Feed ဆိုတာ ယူရတာလွယ်ကူပေမယ့် ကိုယ်ပြန်ပေါ်စေချင်သလိုမျိုး ပေါ်ဖို့အတွက်ကတော့ ခက်ခက်ခဲခဲ လုပ်ဆောင်ရတာပါ။
Beginner တွေအတွက်ကတော့ WordPress မှာ ပိုစ့်ကို ကိုယ်လိုချင်သလိုပေါ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ခက်ခက်ခဲခဲ လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ကျနော်ပြောပြမယ့် နည်းလမ်းလေးကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးလုပ်ဆောင်ကြည့်ရအောင်ပါ။
(၁) ပထမဦးဆုံးအချက်အနေနဲ့ ကျနော်တို့ ယူမယ့် WordPress Website ကနေ RSS feed ထုတ်ယူပေးရပါမယ်။ ဘယ်လိုထုတ်ရမလည်း ဆိုရင်တော့ ကိုထုတ်မယ့် ဝဘ်ဆိုဒ်မှာ အရင်ဦးဆုံး Website Link နောက်မှာ RSS ဆိုတာလေးထည့်ပေးရပါမယ်။ ကျနော်က Category ရဲ့အောက်က Blog ထဲက Feed ကိုပြချင်တာပါ။ အဲ့ဒီတော့ ဥပမာ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ရဲ့ RSS Feed ကတော့
( ၂ ) ဒုတိယအဆင့်ကတော့ ကိုယ်ပြမယ့် Website မှာ WP RSS Aggregator – Automatic and Powerful Content Aggregation and Curation ဆိုတဲ့ Plugin ကိုသွင်းပေးရပါမယ်။ Plugin သွင်းတဲ့ပုံစံကတော့
Plugins > Add New ကိုသွားပြီးတော့ WP RSS Aggregator လို့ရိုက်ပြီး Install > activate လုပ်ပေးရင်ရပါပြီ။ နောက်တစ်နည်း ပုံမှန်အတိုင်း ကိုယ်တိုင် Upload လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အရင်ဦးဆုံး Plugins Link ကိုသွားပြီးတော့ Download လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Link ကတော့
ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကိုရောက်ပြီဆိုရင် Download Plugin လုပ်ပြီးတော့ Plugins > Add New > Upload Plugin > Browse Plugin > Install > Activate ဆိုတာနဲ့ သင့်ရဲ့ Plugin ကိုသွင်းပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါ။
Ok Plugin ကိုသွင်းပြီးပြီ ဆိုရင် ဘယ်လို ဆက်လုပ် ရမလည်းဆိုရင် RSS Aggregator > Feed Source > Add New ကိုသွားပြီးတော့ Feed Name ပေးပါ။ ကြိုက်တဲ့ နာမည်ထည့်လို့ရပါတယ်။
ပြီးရင် feed URL ကိုထည့်ပေးပါ။Limit မှာ ကိုယ်ပေါ်စေချင်သလောက်ကိုထည့်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ နောက်ဆုံး ၅ပိုစ့်ပဲပေါ်စေချင်တော့5လို့ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ပြီးရင် Link to enclosure နဲ့ Use Source Info ကိုအမှန်ခြစ်လေးခြစ်ပေးပါ။ ပြီးတာနဲ့ Publish လုပ်လို့ရပါပြီ။
Publish လုပ်ရင် Short Code လေးတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ Short Code ပေါ်လာပြီဆိုရင် အဲ့ဒီ Short Code လေးကို ကူးပြီးတော့ Short Code နေရာကိုထည့်သွင်းပြီး Publish လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Short Code ကိုဘယ်လိုထည့်ရမလည်းဆိုရင်တော့ ကိုယ်က Page Builder Plugin တွေဖြစ်တဲ့ Divi Builder, Elementor, Beaver Builder, WP Bakery စတဲ့ ဟာတွေဆိုရင်တော့ Short Code Plugin ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ အလွယ်တကူပဲ ကုဒ်လေးကို ကူးယူပြီး ထည့်သွင်းလို့ ရပါတယ်။ တကယ်လို့ကိုယ်က Builder Plugin တစ်ခုခုကို အသုံးမပြုထားဘူးဆိုရင်တော့ WordPress Shortcodes Plugin — Shortcodes Ultimate ဆိုတာကိုသုံးပေးရပါမယ်။ ခုနက အပေါ်မှာပြောသလိုမျိုးပဲ Plugin ကို အဆင့်ဆင့် Install ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Link ကတော့
ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ WordPress ShortCodes Plugin နဲပတ်သတ်ပြီးတော့တော့ မရေးပြသေးပါဘူး။ နောက်ပိုင်းမှာ လူမေးများရင် တင်ဆက်ပေးပါမယ်။
ကဲဒါလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Burmese Web Blog
© 2020 Burmese Web. All Right Reserved.